May 2019 – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 19, 2019 kooxda 0
Waxa si Rasmi ah u dhamaaday horyaalada kala duwna ee ee yurub xilli ciyaareedkan xilli maanta oo Axad ah la ciyaari doono kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalada qaar. Kooxaha reer yurub ayaa u dagaalamaya boosaska
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Paul Pogba ayaa bogiisa Instagram-ka soo dhigay Muuqaal isaga oo jooga Masaajidka Nabi Mohamed (صلى الله عليه وسلم) maalmo yar kadib markii uu dhamaaday xilli ciyaareedka
Tababaraha Kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa taariikh ka sameeyay England kadib markii uu kooxdiisa Man City kula guulaystay koobka FA Cup-ka xilli ciyaareedkan. City ayaa dhamaystirtay saddexleyda Maxaliga ah kadib markii ay guusha
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee Roberto Firmino ayaa war fiican u soo saaray taageerayaasha Kooxdiisa 2 todobaad kadib finalka tartanka champions League ay la ciyaari doonaan kooxda Tottenham. Roberto Firmino ayaan kooxdiisa Liverpool
Fox Sporta ayaa shaaca ka qaaday xilliga ay Real Madrid ku dhawaaqeyso saxiixa Luka Jovic iyo Hazard . Jovic oo la xusay in Real la hishiyeen waxaa uga baxeysa 60 milyan euro halka Hazard-na ay
Pogba ayaa sabab u noqday in Man United ay dib u dhigaan wadahadaladdii ay kula jirtay kooxda Lyon ee ay ku doonayeen Tanguy Ndombele . Laacibkaas reer France ee Tanguy Ndombele ayaa soo jiitay indhaha
Tababare muujiyay dareenkiisa ka dib markii City uu ku hogaamiyay in ay nus darsin goolal ah ay FA Cup-ka kaga qaadaan kooxda Watford Waxa uu xusay in uu goob joog u noqday final aan la
Real Oo Ka War Soo Saartay Dhaawaca Dani Ceballos , Qaranka Spain Ee Da`yarta Dharbaaxo Ayaa Ku Dhacday
Kooxda Real Madrid ayaa ka warbixisay nooca dhaawac ee gaaray qadkooda dhexe Dani Ceballos kaasi oo aan ciyaari doonin kulanka La Ligaha ugu dambeeya ee ay axadda la ciyaarayaan kooxda Real Betis Waxa ay Real
Man City ayaa nasiinada ugu dirtay Watford laba gool oo nadiif ah xilli guud ahaan kubadda maamulkeeda uu gacanta ugu jiray City , waxa uuna kulankaan ahaa finalka FA Cup-ka Watford waxa ay biloowgii isku
Man City Oo U Dhaw In Ay Soo Sameyaan Hishiiskii Ugub Qaalisanaa Taariikhdooda.
Wargeyska The Sun ayaa sheegaya in kooxda Man City ay aad ugu dhaw dahay in ay la soo wareegaan qadka dhexe kooxda Atletico Madrid ee Rodri . Laacibkaas 22 sano jirka ah ayaa waxa aad
Xiddigaha Barcelona Oo Diidan In Uu Antoine Griezmann Ku Soo Biiro Barcelona & Sababta Oo La Ogaadyay
Qolka Labiska Kooxda Barcelona ayaa ka soo hor jeeda saxiixa Antoine Griezmann ee ku soo biirista kooxda Barcelona sida ay sheegayaan wararka ka imanaya dalka Spain. Griezmann ayaa xaqiijiyay in uu ka tagayo kooxda Atletico
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa bartilmaameed u ah kooxaha Paris Saint-Germain iyo Real Madrid kadib xilli ciyaareed cajiib ah oo uu ku soo qaatay kooxdiisa Arsenal iyaga oo isku diyaarinaya
Kooxda Man United ayaa wadahadalo la furtay kooxda Fulham kaas oo ay ka doonayaan saxiixa xiddiga garabka daafaca ka ciyaara ee Ryan Sessegnon sida uu sheegayo saxafiga Sky Sport ee David Garrido. David Garrido ayaa
Matthijs de Ligt Oo Lagu Arkay Magaalada Koox Si Weyn Loola Xiriirinayo Adeegiisa
Daafaca aadka looga doonayo suuqa kala iibsiga ee u ciyaara kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa u muuqda mid haatanba doortay kooxdiisa cusub ee uu u ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe. Daafaca reer Holland
Eden Hazard: Riyadaydu Wa In Aan Noqdo Xiddiga Ugu Fiican Adduunka
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda chelsea ee Eden Hazard ayaa shaaca ka qaaday in uu ku riyoodo in uu noqdo xiddiga ugu fiican adduunka maalin maalmaha ka mid ah. Xiddiga reer Belguim ayaa haatan ka